Pioneer: Ciyaarta Halista Weyn ee Cidlada ah | Laga soo bilaabo Linux
Pioneer Waa mid ka mid ah ciyaaraha jilitaanka booska dhammaystiran oo aan ka heli karno gudaha Linux. Waxaa loo dejiyay mustaqbal aad u fog, gaar ahaan qarnigii XNUMXaad, halkaas oo aan ka baari karno nidaam kasta oo meerayaal ah Milky Way, iyadoo la adeegsanayo nidaam aad u dhameystiran ciyaarta. la mid ah kaasoo ay adeegsadaan Soohdinta: Elite2.
Pioneer wuxuu leeyahay sawiro qurxoon oo qurux badan leh animations iyo goobo. Nidaamka xakamaynta ee dayax gacmeedyada ayaa si aad ah loo qaabeeyey, oo bixiya raaxo cajaa'ib leh iyo ciyaar ciyaar taas oo kordhinaysa heerka dhabta ee jilitaanka.
Ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee ciyaartan, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Kiiboodh buuxa iyo taageero joystick
Nidaamka qurxinta marxaladda cajiibka ah.
Tiro aad u tiro badan oo maraakiibta cirka ah oo laga kala xusho.
Nidaamka hawlgalka dayax gacmeedka oo aad u dhameystiran oo si fiican loo farsameeyay.
Ku darista HUD qolka ay ku xiran yihiin maraakiibta waaweyn.
Nidaam dagaal oo weyn.
Saamaynta dhawaaqa wanaagsan iyo dhawaaqa.
Pioneer waa mid ka mid ah ciyaaraha jilitaanka ugu macquulsan uguna dhameystiran ee Linux iyo tan ugu fiican, waa 100% lacag la'aan iyadoo lagu mahadinayo shatigeeda GPL.
Bogga rasmiga ah: Pioneer
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Pioneer: Ciyaarta Halista Weyn ee Cidlada ah
Waa maxay ciyaar xiiso badan!